झन्डै २२ लाख पर्ने महँगो मेसिन सस्तोसँग सुटुक्क साटियो ! - झन्डै २२ लाख पर्ने महँगो मेसिन सस्तोसँग सुटुक्क साटियो !
२०७6, ३ बैशाख, 07:04:31 AM
वीरगञ्ज । नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा रहेको किलिया मेसिन गुपचुप साटिएको खुलासा भएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा भूषण यादवले लेखेका छन् ।
करिब २ वर्षअगाडि अस्पतालले झन्डै २२ लाख पर्ने मेगलमी ८०० मोडलको किलिया मेसिन खरिद गरेको थियो । थाइराइड, क्यान्सर, बाँझोपनलगायत विभिन्न हार्मोन परीक्षण गर्ने किलिया मेसिन करिब २५ दिन अगाडि साटिएको प्रयोगशालाका कर्मचारीले दाबी गरेका छन् ।